भरतपुरमा कांग्रेसको स्वतन्त्र उम्मेद्वार आज चुनिने, गठबन्धनको भागबण्डा पनि सकियो | Chitrawan Khabar
आज नेपाल र क्यानाडा भिड्दै , यसरी हेर्नुहोस लाइभ
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रतिलिटर १८१
आठ करोडभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर
माओवादीमा पदाधिकारी र स्थायी कमिटी टुंगो लगाउन माग
सिसिटिभी फुटेज मेट्नु अर्थमन्त्रीको जघन्य अपराध: प्रदीप ज्ञवाली
भारतीय दूतावासका सुरक्षागार्डले गरे आफैंलाई गोली प्रहार, घटनास्थलमै मृत्यु
चितवनमा रोजगार मेला हुने , १० हजार बढीले अबलोकन गर्ने भरतपुर महानगरको अपेक्षा
५. बामदेव गौतमको नया पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा श्रीमती र छोरा
६. पहिरोमा परी २५ जनाको मृत्यु, ३८ जना बेपत्ता
७. राजेश हमालले भेटे प्रचण्डलाई , माओबादी प्रवेश गर्लान् त राजेश हमाल ?
८. सप्तगण्डकीका प्राध्यापकमाथि हातपात भएको भन्दै अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको आपत्ति
९. १५ महिला र ९१ पुरुष सहित १०६ जनाले गरे चनौलीमा रक्तदान
१०. लियो क्लब अफ भरतपुर युथको अध्यक्षमा लियो कृष्ण रिमाल (ह्यारी) निर्वाचित
भरतपुरमा कांग्रेसको स्वतन्त्र उम्मेद्वार आज चुनिने, गठबन्धनको भागबण्डा पनि सकियो
चितवन, वैशाख ११: चितवनमा सत्ता गठबन्धनका दलले सात पालिकामा भागबण्डा टुंग्याएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर माओवादी केन्द्र र उपमेयर कांग्रेसले पाउने गरी पालिकामा भागबण्डा गरिएको छ ।
भागबण्डा टुंगिएपनि भरतपुरबोहक अन्य पालिकामा उम्मेद्वारको अझै टुंगो लागेको छैन । दलहरुले आज साँझसम्ममा उम्मेद्वारको पनि टुंगो लगाउने तयारी गरेका छन् । ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज र भोलि मनोनयन दर्ता गर्ने समयावधि आयोगले तोकेको छ ।
कांग्रेसका उपसभापति राजीव न्यौपानेले आज साँझसम्म गठबन्धनले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने जानकारी दिए । भोलि १ बजे संयुक्त रुपमा मनोनयन दर्ता गरिने उनले बताए । ‘आज बेलुकासम्म उम्मेद्वारको टुंगो लगाइन्छ । भोलि १ बजे चौविसकोठीदेखि झाँकीसहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर संयुक्त रुपमा मनोनयन दर्ता गर्ने तयारी छ’, उनले भने ।
भरतपुरको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले उमेदवारी दिने भएकी छन् । उपमेयरमा कांग्रेस भरतपुर महानगर समितिका सभापति चित्रसेन अधिकारीको चर्चा छ ।
कांग्रेसले रत्ननगर, खैरहनी, कालिका र इच्छाकामनाको प्रमुखमा उमेदवार उठाउने गरी सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको उनले बताए । माओवादी केन्द्रले माडी र नेकपा ९एकिकृत समाजवादी०ले राप्तीको प्रमुखमा उमेदवार उठाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले राप्ती र माडी, समाजवादीले रत्ननगर र माओवादीले खैरहनी, कालिका र इच्छाकामनाको उपप्रमुखको पदमा उमेदवार उठाउने छ । सात पालिकाका ९८ वटा वडामध्ये कांग्रेसले ५९ वटा वडा पाएको न्यौपानेले बताए । बाँकी ३९ वडामा माओवादी र समाजवादी मिलेर भागबण्डा गर्दै छन् । भरतपुर महानगरका २९ वडामध्ये कांग्रेसले मात्रै २० वडा पाउने सहमति भएको उनले बताए ।
महानगरको प्रमुखमा भने कांग्रेसका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरुले आज स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् ।
३ मतले चुनाव हारेका एमाले उम्मेदवार थापाले हाले मुद्दा पुनः मतगणनाको माग
बालेनले नेपाली र नेपाल भाषामा सपथ लिँदा सुनिताले लिईन नेपाल भाषामा मात्र
स्थानीय तह निर्वाचनः एमालेबाट ११ हजार ८८३ जनप्रतिनिधि निर्वाचित